महिलाले हाँकेको मुलुक « Loktantrapost
३ कार्तिक २०७३, बुधबार १५:१८
नेपालमा अहिले सम्मानित राष्ट्रपति छिन् विद्यादेवी भण्डारी, संसद् अध्यक्ष अर्थात सभामुख छिन् ओनसरी घर्ती मगर र न्यायमन्दिरको उपल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की छिन् । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला नै, विश्वमै नभएको संयोग नेपालमा भएको छ । जुन नेपाली नारीको सशक्तिकरणका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालमा चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने छनक देखाएको छ । सबै दलका सम्भावित उम्मेद्वारको नाम र कामको बारेमा चर्चा सुरु भइसकेको छ । अधिकांश क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिलाई ओझेल्याइएको छ । अचम्म त यो छ कि, राष्ट्र हाँक्ने महिलाहरू, उच्च निकायमा पुग्ने महिलाहरूलाई स्थानीय निकायमा स्थान दिन किन कञ्जुस्याइँ ? मुलुकका हरेक परिवर्तनमा महिलाको सशक्त योगदान छ । चाहे हिजो प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन होस् वा जनयुद्ध हुँदै २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमै किन नहोस् । महिलाहरू आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा रहे । अहिले विश्वले नेपाली महिलाको शक्ति देखिरहेको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाले नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर, धेरै मुलुकले महिलालाई शासन सत्ताबाट हटाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएको इतिहास पनि छ । भर्खरै निवर्तमान भएकी ब्राजिलकी राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ र अस्ट्रेलियाकी पूर्व जुलिया गिलार्डले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि विभिन्न कोणबाट असफल सावित गराइयो । पाकिस्तानमा बेनेजिर भुट्टो, बङ्गलादेशमा शेख हसिना, छिमेकी भारतमा इन्दिरा गान्धी, श्रीलङ्कामा सिरिमाओ बन्दरानायिके र म्यानमारकी आङसाङ सुकीले विश्वको महिला आन्दोलनको अगुवाई गरे । बेलायतमा महारानी एलिजावेथ, जर्मनीमा एञ्जेला मार्केल, अर्जेन्टिनामा क्रिस्टिना फर्नान्डेज आदि नेतृले कुशल नेतृत्व प्रदान गरे । सामाजिक न्याय र महिला शिक्षाका लागि लड्दा पाकिस्तानी सामाजिक अभियन्ता मलाला युशुफजाईले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिन् ।
अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति बन्ने वातावरण तयार हँुदैछ । उनलाई राष्ट्रपति बराक ओमाले खुलेर सहयोग गरिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । राष्ट्रपतिको दौडमा पूर्व विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्प रहेका छन् । तर, अमेरिका जस्ता मुलुकमा महिलामाथि कति ठूलो विभेद हुँदो रहेछ भन्ने तथ्यको पुष्टि पछिल्लो समय क्लिन्टनमाथि महिला नेतृहरूले नै गरिरहेको आक्रमणबाट पुष्टि भइरहेको छ । अमेरिकामा धेरै महिला यस्ता पनि छन्, जो महिलाबाट शासित भएको स्वीकार्न तयार छैनन् । तर, नेपाली समाज राज्यको शासन व्यवस्था र महिलाको प्रतिनिधित्वको सवालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा पनि एड्भान्स छ ।
स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा महिलाले उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष जस्ता पदमा बसेर होइन, कार्यकारी नेतृत्वमा बसेर काम गर्न सक्छन् भन्ने भावनाको विकास गरौँ । जसले यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकासमा सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेर सन्देश प्रवाह गर्ने छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशका पदहरूमा महिलालाई उपाध्यक्ष जस्ता दोस्रो तहको वरियतामा सीमित राख्ने खेलो नहोला भन्न सकिन्न । तर मुलुक हाँकिरहेका महिला जगतले अब विगतको जस्तो कोषाध्यक्षमा चित्त बुझाउने छैनन् । महिलालाई कार्यकारी प्रमुखकै पदमा अवसर दिन दलहरूले अब हिम्मत गर्नै पर्छ । मागेर पाइएन भने खोसेर भए पनि अधिकार लिने हिम्मत महिलाले पनि प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।
कृषि कर्म गरेर राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएकी झापा दुधेकी मौरीपालक कृषक देवीमाया दाहाल, खेलक्षेत्रमा ख्याति कमाएका रुविना क्षेत्री, मेनुका राउत, मिना पाठक, पाइलट जिना लिङ्देन, डा. बिमला बुढाथोकी, साहित्य क्षेत्रमा भवानी क्षेत्री, लीला अनमोल, राधिका राय, आरती पोखरेल, खगिन्द्रा खुशी र राजनीतिककर्मी धर्मशीला चापागाई, पवित्रा निरौला खरेल, माया गुरुङ, चन्द्रा श्रेष्ठ, मेनुका काफ्ले, गौरा प्रसाई, अम्बिका राजवंशी, जीवन घिमिरे, उषा गुरुङ, सुशीला ढकाल, गिरिराजकुमारी प्रसाई, जसमाया गजमेर, उमा शिवाकोटी, गोमा भट्टराई, लक्ष्मी उप्रेती, सङ्गीता रौनियार, दुर्गा खतिवडा, शारदा शर्मा, रेणुका डाँगी, कविता शर्मा, जानुका ओली, रचना घिमिरे, डम्बरकुमारी थापा, विना तामाङ, गङ्गा मास्के, झुमा बानियाँ, कल्पना ओली, शुभद्रा अर्याल, राधा प्रधान, राधा कार्की, सामाजिक अभियन्ता इन्दिरा राना, कोपिला बस्नेत आदि प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । हाम्रो समाजमा विश्व हाँक्न सक्ने नारी पनि जन्मिएका छन् ।